तपाईंको आईफोन सक्कली हो कि नक्कली ? यसरी पत्ता लगाउनुहोस् - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com तपाईंको आईफोन सक्कली हो कि नक्कली ? यसरी पत्ता लगाउनुहोस् - खबर प्रवाह
एप्पल आईफोन सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने प्रिमियम मोबाइलमध्ये एक हो । विभिन्न फिचर र सुविधाका कारण यसको लोकप्रियता बढ्दो छ । जसकारण नक्कली आईफोन बिक्री गर्ने गिरोहले पनि मौका छोप्ने गर्छन् ।
नक्कली आईफोन र एप्पल एक्सेसरिज यति एड्भान्स भइसकेको छ कि कहिलेकाहीँ पत्ता लगाउन पनि गाह्रो पर्छ । तर, आज हामी तपाईंलाई केही टिप्स दिँदैछौं, जसबाट तपाईंले आफ्नो आईफोन नक्कली वा सक्कली पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ ।
बनावटमा ध्यान दिनुस्
आईफोन नक्कली हो कि सक्कली भनेर छुट्याउन सबैभन्दा पहिलो तरिका भनेको त्यसको बनावट हो । आईफोनको डिजाइन र निर्माणमा पर्फेक्शन हुन्छ भने नक्कलीमा हार्डवेयर एकदमै सस्तो देखिन्छ । यदि हार्डवेयर कमजोर छ भने त्यो आईफोन नक्कली हो ।
आईफोनको हार्डवेयर विशेष गरी मेटल र काँचको बनेको हुन्छ । यद्यपि म्याट फिनिसिङ टप एण्ड मोडलमा हुन्छ । त्यस्तै आईफोनको रंगबाट पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ ।
एप्पल स्टोरमा जानुहोस्
यदि तपाईं आईफोन किन्ने योजना बनाउनु भएको छ भने तपाईं पहिले आफ्नो स्थानीय एप्पल स्टोरमा जानुहोस् । आईफोनको लुक र फिल हेर्नुहोस्, बनावट महसुस गर्नुहोस् र मूल्य बुझ्न्होस् । यदि कसैले तपाईंलाई प्रयोग भएको आईफोन बेच्न लागेको छ तर, मूल्य कम छ भने त्यस्तोमा तपाईंले शंका गर्नुपर्छ ।
आईफोनको प्रमाणित गर्ने दोस्रो तरिका भनेको एप्पलको आधिकारिक वेबसाइटमा गएर जाँच्नु हो ।
आईएमईआई सिरियल नम्बर जाँच गर्नुहोस्
सबै प्रमाणित आईफोनमा आईएमईआई वा सिरियल नम्बर हुनुपर्छ । सेटिङमा ‘सामान्य’ र ‘अबाउट’मा ट्याप गर्नुहोस् । तल स्क्रोल गर्नुहोस्, जबसम्म सूचीबद्ध आईएमईआई नम्बर देखिँदैन । यदि आईफोनमा आईएमईआई वा सिरियल नम्बरमा कमी छ वा केही पनि छैन भने त्यो फोन सम्भवतः नक्कली हो ।
अपरेटिङ सिस्टमको जाँच गर्नुहोस्
आईफोनलाई अनौठो बनाउने चिज नै यसको अपरेटिङ सिस्टम हो । यो आईओएसमा काम गर्छ, जो एप्पलले आफैं डिजाइन गरेको हो । तर, नक्कली आईफोन एन्ड्रोइडद्वारा सञ्चालित हुन्छ । उपभोक्तालाई झुक्याउन माथि आईओएस जस्तै देखाइएको हुन्छ । जसकारण नक्कली आईफोन सक्कली जस्तै लाग्छ ।
बिक्रीकर्तालाई सिरीले काम गरेको छ कि छैन देखाउन भन्नुहोस् । सिरी एक भ्वाइस असिस्टेन्ट हो, जो केवल एप्पल डिभाइस्मा काम गर्छ । यदि आईफोन बिल्ड–इन सिरीको साथमा आउँदैन भने तपाईंको फोन नक्कली हो ।
स्टोरेज क्यापासिटीमा ध्यान दिनुहोस्
आईफोनमा माइक्रोएसडी कार्ड स्लट हुँदैन किनकि आन्तरिक मेमोरी नन एक्सपेन्डेबेल हुन्छ । नक्कली आईफोनमा एक एक्सपेन्डेबल स्टोर हुन्छ ।
नक्कली पावर एडेप्टर र चार्जर हेर्नुहोस्
पावर एडेप्टर र चार्जर सक्कली हो/होइन भन्ने थाहा पाउने प्रक्रिया कम्पनीको वेबसाइटमा एक सपोर्ट पेजको माध्यमबाट दिइएको छ । साथै एप्पलले बजारमा बेच्ने पावर एडेप्टर, चार्जर एक उचित प्याकेजमा आउँछ । साथै पावर एडेप्टर र चार्जरसहित एप्पल एक्सेसरिज महँगो हुन्छ । नक्कलीको एकदमै कम हुन्छ ।
तपाईं थर्ड पार्टी निर्माण कम्पनीबाट पनि एप्पल एक्सेरिज खरिद गर्न सक्नुहुन्छ । तर, ती एक्सेसरिजहरू किन्नुअघि सुनिश्चित गर्नुहोस् कि एप्पलले प्रमाण गरेको छ कि छैन । प्याकेजमा स्पष्ट रुपमा ‘मेड फर आईफोन’ वा ‘मेड फर आईफोन आईप्याड आईपड’ लेखिएको हुन्छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालय हेरफेर
मन्त्री आलेको अर्को कदम , नेपाल एयरलाइन्सको टिकटबाट युरोप, अष्ट्रेलिय र एशियामा यात्रा गर्न पाइने